Real Madrid oo dalabyo ku aaddan Gareth Bale ka heshay afar kooxood oo ka dhisan qaaradda Yurub – Gool FM
(Madrid) 22 Luulyo 2019. Afar kooxood oo ka dhisan qaaradda Yurub ayaa la soo sheegayaa inay dalabyo fursad ay kula saxiixan karaan Gareth Bale u soo gudbiyeen Real Madrid intii lagu guda jiray suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Tan iyo markii uu dib u soo laabtay Zinedine Zidane, Weeraryahan Bale ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu isaga tagi doono garoonka Bernabeu, iyadoo macallinka kooxda uu xaqiijiyey Axaddii in dhaliyahan uusan ku jirin qorshihiisa mustaqbalka.
Sida ay warinayso Jariiradda AS, natiijadaas ayaa ka dhigtay in 29-sano jirkaan ay dalabyo ka soo gudbiyaan kooxaha Manchester United, Tottenham Hotspur, Bayern Munich iyo Inter Milan.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Real Madrid ay ku guuldarreysatay inay dalabyadaas ka faa’iideysato oo ay iska dirto xiddigan xulka qaranka Wales, kaasoo weli qandaraaskiisa kooxda ay kaga harsan tahay saddex sanadood.
Waxaa sidoo kale jira warar kale oo heeshaya in Bale uu dalab hal milyan oo gini todobaadkii ku qaadanayo ka helay dalka Shiinaha, halka sidoo kale kooxda Paris Saint-Germain ay u furan tahay heshiis isku bedelasho ah oo la xiriira Neymar Jr.